Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Onye isi oche Board Tourism Board na Senegal na ozi dị mkpa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -emegharị na Senegal • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi oche ATB na Senegal
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke African Tourism Board (ATB), na-aga n'ihu na njem ya nke njem n'akụkụ ọ bụla nke njem nlegharị anya n'Africa iji mee ka kọntinent ahụ jikọta ọnụ.
E nwere ọgbakọ abụọ na ndị otu African Tourism Board maka imegharị Senegal n'ime akara ukwu kọntinent.
N'okwu a bụ atụmatụ imekọ ihe ọnụ na ọchịchọ ime ka mmekọrịta dị n'etiti otu abụọ ahụ kwalite njem nlegharị anya.
Nzukọ ndị a bụ onye nnọchi anya Honorable Mr. Deme na onyeisi oche, Cuthbert Ncube.
Ternyaahụ na Ndị njem nlegharị anya nke Africa Onye isi ala zutere Onye isi oche nke Compact Yaatal, otu nzukọ nke na-anọchite anya ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Senegal na ndị otu 934 bara uru n'isi ụlọ ọrụ ha n'obodo Soly nke na-eje ozi dị ka ebe ndị njem na-eduga na mba ahụ.
Onye isi oche nke otu ahụ, Mr. Boly Geuye, nwere ọgbakọ abụọ na ndị otu ATB bụ nke onye nnọchi anya Honorable Ambassador Mr. Deme na onye isi oche Cuthbert Ncube duziri na atụmatụ imekọ ihe ọnụ na ime ka mmekọrịta dị n'etiti otu abụọ ahụ kwalite njem njem na njem. na-emegharị Senegal n'ime akara ukwu kọntinent.
Senegal emeela ihe dị ukwuu n'ịkwụsị mgbasa nke ọrịa na mba ahụ na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụọgụ ọrịa 0% nke dọtara ọtụtụ ndị njem nlegharị anya site na Paris, Spain, Germany, UK na akụkụ Eshia. Mazị Boly kwusiri ike na ọ dị mkpa ka ya na ATB na-emekọ ihe ọnụ iji nwee nhazi nhazi kọntinent a na-ahazi nke ọma, dịka Senegal edobere n'ụzọ dabara adaba igwu egwu n'ihu na nka, omenala, na njem nlegharị anya egwuregwu n'ofe na n'elu ebe nkiri n'akụkụ osimiri ha na-egosi na-eme ka onye njem ahụ hụ ebe a mara mma nke bụ ebe ndị njem mba ụwa na-achọsi ike.
A ga-anabata nnukwu abalị maka njem nlegharị anya n'ụdị ogbako na Disemba 10, 2021, nke ga-eweta ndị ozi njem nlegharị anya na ndị otu sitere na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka, nke ndị minista njem nlegharị anya ga-anabata ma kwado ATB. Mmekọrịta dị ukwuu na nke sara mbara n'ofe ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya ga-eme ka Africa bụrụ onye a na-asọpụrụ nke ọma n'ime obodo zuru ụwa ọnụ, na njem nlegharị anya ga-eme ka ọ rụpụta ya na nke a.